တရုတ် အက် ပလီကေးရှင်း များ ပိတ်ပင် မှု အသစ် အိန္ဒိယ စတင် - Pandaily
(Source: Free Fire)
တရုတ် အက် ပလီကေးရှင်း များ ပိတ်ပင် မှု အသစ် အိန္ဒိယ စတင်
Feb 15, 2022, 21:24ညနေ 2022/02/16 02:21:10 Pandaily
အိန္ဒိယ အစိုးရသည် တနင်္လာနေ့တွင်တ႐ုတ္ အင္တာနက္ အက္ ပလီ ေကး ရွင္း ၅၄ ခု ထပ္မံ ပိတ္ပင္ ခံရအကြောင်းပြ ချက်မှာ ၎င်းတို့သည် “လုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက် မှု” ဖြစ်သည်။
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၉ (က) အရ အေရးေပၚ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္ စမတ္ဖုန္း အက္ ပလီ ေကး ရွင္း ၅၄ ခုကို တားျမစ္ ရန္ အိႏိၵယ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထံမွ အႀကံျပဳ ခ်က္ကို ေအဂ်င္စီက လက္ခံရ ရွိေၾကာင္း အိႏိၵယ အီလက္ထ ရြန္ နစ္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အီလက္ထ ရြန္ နစ္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန သည္ အိႏိၵယ တြင္ အဆိုပါ အက္ ပလီ ေကး ရွင္း မ်ားကို ပိတ္ပင္
အိန္ဒိယ တွင် တားမြစ် ထားသော တရုတ် အက် ပလီကေးရှင်း များတွင် အဓိကအားဖြင့် ကိရိယာများ၊ ဂိမ်း များနှင့် ဗီဒီယို ချက် တင် များ ပါဝင်ပြီး အဓိက နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များဖြစ်သော Tencent , Alibaba နှင့် NetEase တို့ပါဝင်သည်။
အိန္ဒိယ မီဒီယာ များက တားမြစ် စာရင်းတွင် မိုဘိုင်း ဂိမ်း အက် ပလီကေးရှင်း “Free Fire” ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ Free Fire သည် Survival Shooting ဂိမ်း ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူ အခြေစိုက် နည်းပညာ အဖွဲ့ Sea မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ Tencent သည် SEA ၏အကြီးဆုံး အစုရှယ်ယာ ရှ င်ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် Tencent သည် Sea တွင် ရှယ်ယာ ၂၁. ၃% မှ ၁၈. ၇% သို့လျှော့ချ ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် မဲပေး ခွင့်ကို ၁၀% အောက် သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။
အချက်အလက် တွေအရ Free Fire ဟာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ လူကြိုက် အများဆုံး စမတ်ဖုန်း ဂိမ်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂူး ဂဲလ် ပလေးမှာ အကြိမ် ပေါင်း ၁ ဘီလီယံကျော် ဒေါင်းလုပ် ဒ် ရယူ နိုင်ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် ဂိမ်း သည် အိန္ဒိယ တွင်အလွန် လူကြိုက်များ ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် အိန္ဒိယ တွင် အမြင့်ဆုံး လစာ ရသော စမတ်ဖုန်း ဂိမ်း ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် လမှ စ၍ အိန္ဒိယ အစိုးရသည် TikTok နှင့် WeChat အပါအ ၀ င် တရုတ် အက် ပလီကေးရှင်း ၂၂ ၄ ခုကို ပိတ်ပင် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi, OPPO, OnePlus တို့ အပါအဝင် တရုတ် ကုမ္ပဏီ များ၏ ပြည်တွင်း ရုံး များကို အိန္ဒိယ ဝင်ငွ ေခွန် ဌာနက ဝင်ရောက် စီးနင်း
တရုတ် လျှောက်လွှာ များကို တားမြစ် ခြင်းအပြင် အိန္ဒိယ အစိုးရသည် မကြာသေးမီက နောက်ထပ် တားမြစ် ချက် တစ်ခုကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ ကစၿပီး ျပည္ပ ေမာင္း သူမဲ့ ေလယာဥ္ ေတြ တင္သြင္း မႈကို ပိတ္ပင္ သြားမယ္လို႔ ေၾကညာ ခဲ့တယ္လို႔ အိႏၵိယ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာေၾကာင္း Business Daily သတင္းစာက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သို့သော် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကာကွယ် ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ရည်ရွယ်ချက် များအတွက် မောင်း သူမဲ့ လေယာဉ် များ တင်သွင်း ခြင်းကို တားမြစ် ထား သည်မဟုတ် သော်လည်း ခွင့်ပြုချက် လိုအပ် နေ သေးသည်။ ထို႔အျပင္ ဒ႐ုန္း အပို ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း မႈကိုလည္း မထိ ခိုက္ ေစ ေပ။
အိန္ဒိယ မီဒီယာ တော်တော်များ များက သည် လုပ်ရပ် ဟာ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီ ရဲ့ “Made in India” မူဝါဒကို ပြည်တွင်း ထုတ်လုပ် မှုတွေ တိုးမြှင့် ဖို့ တုံ့ပြန် ဖို့ ရည်ရွယ် တယ်လို့ သုံးသပ် ကြပါတယ်။
Tags application | Mobile Apps | Tencent | TikTok
Alibaba က Tencent ကို ရိုက်နှက်မှု၊ အသံဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ “လိမ်လည်မှု” စတဲ့ နည်းပညာတွေကို တရုတ်အင်တာနက်စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အင်တာနက် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ဟဲဗီးနည်းပညာကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာ အသံအခြေပြု လူမှုပလက်ဖောင်းနဲ့ “လိမ်လည်မှု” စတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။